Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKadri
Ixhotyiswe kakuhle, igumbi elinemigangatho emibini elinosapho elinendawo entle (30m wildmill, 400m old town, 950m Kuressaare Castle kunye nedolophu elunxwemeni).Inomnyango wabucala, indawo yokupaka kwindawo, eyadini (i-BBQ, ibhokisi yesanti) kunye nethafa lelanga elinefenitshala yangaphandle.Ifanelekile kubantu abadala aba-5 kunye nomntwana omncinci o-1 (i-crib 0-3y). Inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba. I-wifi yasimahla, iitawuli kunye namaphepha anikezelweyo. Bona ngakumbi www.kuressaareapartments.com
Ikhitshi lendlu yendlu lixhotyiswe kakuhle. Inesitovu, iketile, ifriji, imicrowave, umatshini wekofu (usebenza ne Paulig cupsolo capsules- ungazifumana kwigrosari ekufutshane), kitchenware njl.Sinezinto eziluncedo kwiintsapho ezinabantwana. Awudingi ukupakisha ikhaya lakho lonke ukuze uze kubizo.Sinezinto zokudlala, imbiza, isihlalo sendlu yangasese, ibhentshi, iincwadi, iziteshi zeTV zabantwana, i-sanbox (eyadini). Iindwendwe zingasebenzisa i-grill kunye nefenitshala ye-terrace.
Indawo ekhuselekileyo kakhulu. Ifulethi linendawo entle. Into ekufuneka uyibone kwisixeko saseKuressaare kukuhamba nje.Akukho mfuneko yeteksi okanye imoto. Indawo yokutyela ekufutshane yi-30 m (Kuressaare windmill), ivenkile yokutya i-290 m, idolophu endala yi-300 m, ibala lokudlala eliphakathi kwesixeko 350 m kunye ne-Kuressaare Castle kuphela i-1 km.
Umbuki zindwendwe ngu- Kadri
Igama lam ndinguKadri Tamme kwaye ndingumamkeli zindwendwe. Ndihlala ebumelwaneni ngoko ke ndifowunelwa kuphela xa kufuneka.Ndiluncedo kakhulu kwaye ndiyazi kakuhle idolophu. Unganditsalela umnxeba xa ufuna naluphi na uncedo okanye ulwazi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kuressaare